सहिद हेम नारायण यादब गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको फाइलन खेलमा विरगंज विजय
प्रकाशित मितिः फाल्गुन १४, २०७५
सिरहा फाल्गुन १४ । सिरहामा आयोजना भएको सहिद हेम नारायण गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता २०७५ को फाइनल खेलमा भारत विहार बक्सरलाई हराउँदै विरगंज नेपाल विजय भएको छ । खेलको निर्धारित समयमा दुवै टिमबाट कुनै गोल गर्न नसकेपछि खेलको समय १४ मिनेट थप गरिएको थियो । थप गरेको समयमा पनि कुनै गोल हुन नसकेपछि खेलको फाइनलमा पुगाउन पलाइनटिमा निर्णयक खेल गराएको थियो । पलाइनटीबाट विरगंजले ३–० गोल गरेको थियो भने बिहार बक्सरले १–० गोल मात्र गर्न सकेको थियो । खेलको फाइनल विजयता नेपालको विरगंजलाई घोषणा गरियो । प्रतियोगिताको विजय प्रथम टिम विरगंजलाई १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ रकम र ट्फि पुरस्कार प्रदान गरियो भने दोस्रो टिम बिहार बक्सरलाई ५१ हजार १ सय ५१ रुपैयाँ र ट्फि प्रदान गरियो । त्यसैगरी वेस्ट गोलकिपर र वेस्ट खेलाडी पुरस्कार विरगंज टिमलाई प्रदान गरियो । खेलको म्यानवदी म्याच पुरस्कार बिहार बक्सरलाई प्रदान गरियो । सम्पूर्ण खेलको सब भन्दा बढि गोलकर्ता पुरस्कार सिरह सल्लहेश टिमको खेलाडी टंक लामालाइ प्रदान गरियो । फाईनल खेलको प्रमुख अतिथि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विसर्कमा रहनु भएको थियो भने विशिष्ट अतिथिहरुमा सिरहा क्षेत्र न. ३ को सभाषद लिलानाथ श्रेष्ठ ,प्रदेश न. २ को साभाषद प्रमोद यादब, जिल्ला अधिकारी रुद्र पंडित, जिल्ला प्रहरी प्रमुख जिवन श्रेष्ठ, खेलकुद परिषद प्रदेश न.२ को अधयक्ष मानदेव हजरा र सहिद हेम नारायण यादबको पुत्र डा.नविन यादब रहुन भएको थियो । सिरहा सदरमुकममा सात दिन देखि चलिरहेको फुटवल खेलमा जम्मा आठ वटा टिमका सहभागिता रहेको थियो ।